Isevisi - iRaymin Display Products Co., Ltd.
Kunemizuzwana embalwa kuphela lelo khasimende elikunikeza yona. Bangaba yikhasimende lakho ngqo uma ungabakhanga ukuthi bazolanda umkhiqizo wakho. Idizayini enhle yokuthengisa ekhadibhodi ekhombisa noma yokufaka iphepha ingakwenzela lokhu.Abaklami bethu baqonda ukuthi bangayenza kanjani futhi bazosebenzisana nawe ukwenza isixazululo esihle, ngezinhloso zokukusiza ukuthi wakhe izinhlelo eziphumelelayo zokumaketha ezithuthukisa ukuthengiswa komkhiqizo wakho.
Asikho isixazululo esijwayelekile endaweni yenkambu yokuthenga. Yileyo ndlela izixazululo zethu zokubonisa ezisebenza ngayo - ukuyenza ihluke njengomkhiqizo nemikhiqizo yakho. Silandela izidingo zakho ezithile futhi siyasebenzisana ukubeka imibono yethu yokudala kuphrojekthi. Siyazi nje ukuthi uzomangala ngemiphumela. Ngakho-ke imibuzo ithi, ungazithola kanjani izixazululo ezinhle kakhulu ezikufanela?
Unomklamo olungele ukuprinta?
Kuyesabeka, umklamo wakho singaba ngokoqobo ngemidwebo yakho. Amasampula okugcona uzonikezwa wena futhi mhlawumbe neziphakamiso zethu zobuchwepheshe.
Uzibuza ngemiphumela yokugcina?
Ungakhathazeki. Sinomklami we-3D ozokusiza futhi ukuba wenze isizinda se-3D ekunikezeni isisu sakho noma umdwebo wakho njll.
Noma awunayo imibono nhlobo?
Akunandaba, vele usithumelele imininingwane yomkhiqizo wakho, sitshele ubuningi nge-FSDU ngayinye okudingeka siyibeke. Sizokwenza ngezifiso isixazululo sakho ngeiziphakamiso zethu zobuchwepheshe. Ngeminyaka eminingi yesipiliyoni ekwakheni izibonisi ze-POP nokupakisha okuthengiswayo, iqembu lethu lokwakhiwa kwesakhiwo selivele lisebenzise imiklamo ezimbonini ezahlukahlukene. Iqembu lokwakha iRaymin Display manje selinikezela ngezixazululo zobungcweti kuwo womabili amabhizinisi angamazwe angaphandle nawaseChina.
Ukuba nomklamo wesakhiwo ubukeka uyingqayizivele akuyona inhloso kuphela, sinesifiso sokwenza ukuthi kubize ngempumelelo. Ngolwazi lokuklama zonke izinhlobo ezihlukile zokubonisa, iRaymin Display izinikele ekusebenziseni indlela yezomnotho yokwakha isibonisi. Songa izindleko zamakhasimende ethu futhi sigcina imvelo ngokusebenzisa okokusebenza okuncane okungaphekiwe futhi sithathe indawo yezinto zepulasitiki ngezinto ezivuselelekayo.
Bona ngeso lengqondo Imiphumela
Ngaphambi kokuqhubeka nokwenza isampula, i-1: 1 ratio i-3D render izonikezwa iklayenti ukuze libe nomfanekiso wesibonisi. Kulula kakhulu kumakhasimende aphesheya kwezilwandle ukuthola imvume esheshayo yamasampuli.
Ukulethwa Kwesampula Okusheshayo
Isampula emhlophe engenalutho iyakwazi ukuqedwa zingakapheli izinsuku eziyi-1-2 zokusebenza ngenkathi isampula yombala ingathatha izinsuku ezingama-2-3 zokusebenza.
Ishaja yesampula yamahhala
Isampula lethu ngokuvamile likhululekile kumakhasimende ethu uma lingathanda ukusifaka i-oda.
Ukuboniswa kweRaymin kunefektri elawula yonke inqubo ngaphakathi endlini, isiqinisekisa amazinga asezingeni eliphakeme kakhulu nokusebenza kahle ukuthola okubonisayo nokupakisha kuwe ngokushesha okukhulu. Sinomshini wethu wokunyathelisa owenziwa nge-offset, umshini wokulaminetha we-auto osayizi omkhulu, umshini wokusika we-auto, ect. Ngokusekelwe kulokhu, sikwazi ukulawula ngokuqinile izindleko nokukhiqiza izibonisi nokupakisha ngokushesha kakhulu kunabanye esincintisana nabo.
Izinsizakalo Zekhwalithi kanye Nangemva Kokuthengiswa yizinto ezibaluleke kakhulu
Sihlala njalo sinamathela kwinkonzo yebhizinisi ethi "Ikhwalithi kanye Nangemva Kokuthengisa iyinto ebaluleke kakhulu". Ukulandela uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO 9001, sakhe ithimba eliqinile le-QC, sisebenzisa abaphathi kuzo zombili ikhwalithi yomkhiqizo kanye nenqubo yokusebenza.
I-1 × KBA Rapida 162 5C Offset Press, Usayizi Wamashidi 1220 × 1620
1 × KBA Rapida 145 5C Offset Press, Usayizi Weshidi 1060 × 1450
2 × Komori Lithrone S40 5C Offset Press, Usayizi Weshidi 720 × 1020
1 × Iphepha Reel Sheeter, Ishidi Usayizi 1700 (W)
1 × Iphepha umsiki, Ishidi Usayizi 1680 × 1680
1 × Auto wokulaminetha Machine, Ishidi Usayizi 1220 × 1620
1 × Auto wokulaminetha Machine, Ishidi Usayizi 720 × 1020
1 × Lukathayela Ukukhweza Machine, Ishidi Usayizi 1650 × 1650
2 × Lukathayela Ukukhweza Machine, Ishidi Usayizi 720 × 1020
I-2 × Epson 7910 Colour Proof Digital Press, Usayizi Weshidi uye ku-610
1 × Rzcrt-2516-ⅡIdigital Cutter
1 × Ect Ibhodi Tester
1 × Amabhokisi, Umshini Wekhadibhodi Ophukile Wemitha Yemitha
Umshini wokuhlola woku-1 × we-Ink Adhesion
Ukuzisika, Ukugoqa nokunamathisela
1 × Auto Die-Cutting Machine, Ishidi Usayizi 1220 × 1620
2 × Auto Die-Cutting Machine, Ishidi Usayizi 720 × 1020
3 × Semi-Auto Die-Cutting Machine, Ishidi Usayizi 1200 × 1620
I-1 × i-Auto Box Folding ne-Gluing Machine, Usayizi Wamashidi 1100 × 1100
1 × I-Auto Box Folding ne-Gluing Machine, Usayizi Weshidi 780 × 780
Ukuze konge izindleko zokupakisha, amanye amaklayenti ancamela ukupakisha imikhiqizo yawo ngqo nge-Cardboard Display. Lokhu kuvame ukwenzeka uma kunezinhlobo eziningi zemikhiqizo okufanele ixutshwe iphakethe ibe yi-FSDU.
Izinsizakalo Zethu Zomhlangano Kubandakanya:
· Ukugcinwa kwezikhangiso nezimpahla
· Ukugcwaliswa kokuboniswa ngakunye ngezimpahla
· Ukubekwa kuma-pallet amancane
· Layisha futhi upake kuma-pallet ajwayelekile
· Ukuhlolwa kwezokuthutha
· Ukugcinwa kwamaphalethi alungile
Amanye amaklayenti adinga futhi ukupakisha iphakethe eli-1 noma amasethi amaningana wokubonisa ebhokisini elilodwa elineshidi lokufundisa lomhlangano.
Imboni yethu itholakale eFoshan, etholakala eduze nechweba laseShenzhen. Kulula kakhulu kithina ukuthi sidlulise i-POS ekhombisa konke. Sinikeza ukuthunyelwa kolwandle, ukuthunyelwa komoya nokudilivwa okuvezwa, ngokuya ngemfuneko yakho.